एक भारतीय ट्याग गरिएको "ज्ञान र ज्ञान" ट्याग गरिएको समाचार ब्लॉग - THE INDIAN FACE
हाम्रो दिनको %०% पर्दाको अगाडि खर्च हुन्छ, हाम्रो दिमागलाई स्वचालित मोडमा छोडिन्छ। जे होस्, जब तपाइँ यसलाई एक शुद्ध एड्रेनालाईन भीड दिनुहुन्छ, हामी भित्र सबै कुरा रिसेट हुन्छ: सृजनात्मकता बढ्छ, हामी जीवित, खुशी, राम्रो महसुस गर्छौं। कति फाइदा! के तपाइँ चरम खेलहरू अभ्यास गर्दा तपाइँको शरीरलाई के हुन्छ भनेर जान्न चाहानुहुन्छ? हामी तपाईलाई सबै कुरा बताउँछौं।
पानीमुनि क्याम्पिंग सम्भव छ
जब खेल र विज्ञान सँगै आउँछन् अविश्वसनीय चीजहरू गर्छन्, प्रायः अन्वेषणमा जोडिएको। त्यसकारण आज हाम्रो लेखमा हामी विशेष 'आधार शिविर' को बारेमा कुरा गर्छौं गोताखोरहरू, पानीमुनि पालहरू, जहाँ तिनीहरू सतहमा जानुहुन्न आराम गर्न सक्छन्। यो कसरी सम्भव छ? हामी तपाईंलाई बताउनेछौं।
Places स्थानहरू जलवायु परिवर्तनका कारण हराउन गन्तव्य
तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कि १०० बर्षमा शब्द "हिमनदी"इतिहासको अंश बन्नुहोस् स्नोबोर्ड आल्प्समा यो कृत्रिम हिउँमा गरिन्छ। त्यो भेनिस, तपाईं मात्र यसलाई तस्वीरहरूमा देख्न सक्नुहुन्छ किनकि यो अब अवस्थित छैन। त्यो गर्न डाइभिंग तपाईं केवल एक गहिरो निलो तल अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ, चट्टान र समुद्री जीवन बिना। नराम्रो लाग्छ यो होइन? आजको हाम्रो लेखमा, हामी तपाईंलाई यी स्थानहरू बारे बताउँदछौं जुन हराउँदैछन् यदि हामी चाँडै कार्य गर्दैनौ भने!
प्रशान्त महासागरीय कचराको ठूलो टापु, यस्तो ठाउँमा जहाँ कसैले कुरा गर्दैन तर हामी सबैलाई यसको बारेमा जान्नुपर्दछ।
विश्व रीसाइक्लि Day दिवसमा हामी तपाईलाई महान् प्रशान्त फोहोर टापुको बारेमा लेख ल्याउँछौं। एउटा महान "ओएसिस" जुन फोहोर र प्लास्टिकको फोहोरले बनेको हुन्छ जुन हामी आफैले बनाउँछौं। थप रूपमा, हामी तपाइँलाई बेन लेकोमटेको बारेमा बताउनेछौं, एक पेशेवर पौडी खेलाडी जसको यस अभियानमा यस टापुको अध्ययनको जिम्मा लिइएको छ र यसले वातावरण र हामीलाई कसरी प्रजातिको रूपमा असर गर्छ।
एड्रेनालाईन: यो के हो र यसले कसरी मस्तिष्कलाई खेलको बखत र पछिको प्रभाव पार्छ
शून्यमा विमानबाट बाहिर उफ्रँदै, उच्च वेगमा माउन्टेन बाइकि des वंश, वा चट्टानी खाडीमा सुस्तता पनि, ती गतिविधिहरू हुन् जसले तपाईंलाई केवल एउटा मात्र चीजको बारेमा सोच्न लगाउँदछ: एड्रेनालाईन। यहाँ हामी तपाईंलाई सबै कुरा सिकाउँदछौं कि तपाईंले यो विशेष हर्मोन र यसले हाम्रो मस्तिष्कमा पार्ने प्रभावको बारेमा जान्नुपर्दछ।
तपाईंको पुरानो सर्फबोर्डहरू मर्मत र पुन: प्रयोग गर्ने विचारहरू!
हाम्रो सर्फबोर्डहरू हामीलाई छाडाहरूमा हाम्रा सबै रोमांचहरूमा साथ दिन्छन्, तिनीहरू हाम्रो सबैभन्दा ठूलो सहयोगी हुन्, तिनीहरू समुद्रमा प्रवेश गर्दा तिनीहरू हाम्रो शरीरको झन्डै विस्तार हुन्छन्। त्यसोभए किन उनीहरूलाई बिदाइ दिनुहोस् जब पानीमा तिनीहरूको भूमिका अब व्यावहारिक हुँदैन? यस पोष्टमा हामी तपाईंलाई धेरै विचारहरू र पहलहरू प्रस्ताव गर्दछौं जसले तपाईंलाई फेरि आफ्नो प्रिय सर्फबोर्डलाई बिदाइ गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।
समुद्री जीवले ग्रेट ब्यारियर रीफलाई लुकाउँछ। तपाईंको मनपर्ने जनावरहरू मध्ये कुन चाहिं हो?
ग्रेट ब्यारियर रीफ पूरै ग्रहमा सब भन्दा ठूलो जलमग्न वासस्थान हो। यस कारणले गर्दा यसको जीव जन्तु ग्रहमा सबैभन्दा रमाईलो छ। यहाँ पत्ता लगाउनुहोस् कि हामी कुन कुन जनावरहरू यस ईकोसिस्टममा फेला पार्न सक्छौं जुन युनेस्को विश्व सम्पदा हो!
सबै विश्वको महान म्याराथनको बारेमा (विश्व म्याराथन मेजरहरू)
त्यहाँ धेरै खेलकूद घटनाहरू छन् जुन विश्वभरि एथलीटहरू एक साथ ल्याउँदछन्, तर निस्सन्देह दौडमा समर्पित घटनाहरू धावकहरूको भीडले भरिएका हुन्छन् जुन उनीहरूको दक्षतालाई टेस्टमा पुर्‍याउन चाहान्छन् र तिनीहरूमा निस्सन्देह, सबैभन्दा प्रख्यात विश्व म्याराथन मेजरहरू: ईतिहास भर संसार भर सबै भन्दा महत्वपूर्ण र मान्यता प्राप्त ग्रान्ड म्याराथन। पढ्नुहोस् र उनीहरूको बारेमा बढि जान्नुहोस्!
तपाइँ सर्फिंग को लागी छालहरु को बारे मा जान्न को लागी सबै चीजहरु: तरंगहरु को प्रकोप, उत्पत्ति र गठन को अनुसार प्रकारहरु
पानीमा चरम खेल र साहसिक प्रेमिका केवल एउटा चीज चाहिन्छ: छालहरू, छालहरू, र अधिक छालहरू! त्यहाँ तपाईंले सोच्न सक्ने भन्दा फराकिलो वर्गीकरण छ! के तपाइँ पहिले नै विभिन्न तरंगहरूको प्रकार थाहा छ? पढ्न जारी राख्नुहोस् र सबै प्रकारका छालहरू पत्ता लगाउनुहोस् जुन उनीहरूको बिभिन्न विशेषताहरूका अनुसार अवस्थित छन्!
हिउँमा सनग्लासको महत्त्व जान्नुहोस्
हिउँदको आगमन र हिउँको लामो प्रतीक्षित प्रतीक्षाको साथ, हामी सबै स्कीइ go जान चाहन्छौं, पहाडहरूमा हिंड्न जान, र बाहिरी खेलकुदसँग सम्बन्धित गतिविधिहरू। हाम्रो आँखा सँधै अनुमोदित धूपको चश्माको साथ संरक्षित हुनुपर्दछ ताकि केराटाइटिस वा अन्य प्रकारको चोटपटक लाग्न नपरोस्!
सनग्लास लगाउने फाइदाहरू जान्नुहोस् polarफहराया
बाट The Indian Face® हामी तपाईलाई बुझाउन चाहान्छौं यसको मतलब के हो यसको मतलब हाम्रो सनग्लासहरू हुन् polarफहराया र पनि, हामी वर्णन गर्छौं कि यस प्रकारको सनग्लाससँग के फाइदा हुन्छ polarफहराईयो र किन तपाईं तिनीहरूलाई तिनीहरूको विशेषताहरु अनुसार छान्नु पर्छ। पढ्न जारी राख्नुहोस्, यहाँ हामी तपाईंलाई सबै सुझावहरू र विवरणहरू तपाईंलाई दिन्छौं!
के स्क्यान छ? polar?
फेब्रुअरी 08, 2021
शताब्दीयौंदेखि, ध्रुवहरूको विजयमा समुद्र एक ठूलो पात्र हो। "अन्वेषणको ढाँचा polar"यो धेरै शताब्दियहरु र खोज प्रेमीहरुको शताब्दीहरु को उद्देश्य हो। यहाँ हामी तपाईलाई भन्छौं अन्वेषण के हो! polar र यसले के समावेश गर्दछ!
कोरल चट्टानहरूको बारेमा १० जिज्ञासाहरू उनीहरूको बारेमा तपाईंलाई के हो?
हामी प्रकृति र यसको सम्बन्धित सबै कुराको आदी छौं ... हामीलाई यो मनपर्दछ! यस कारणका लागि, हामी तपाईंसँग १० जिज्ञासाहरू बाँड्न चाहन्छौं जुन तपाईंलाई हाम्रो लागि तयार गरिएको यस इन्फोग्राफिकमा कोरल रीफको बारेमा थाहा थिएन। हामी जस्तै प्रकृति को खजाना संग प्रेम मा गिर!
ग्रेट ब्यारियर रीफको सुरक्षा एक वास्तविक प्राकृतिक सौन्दर्य!
अष्ट्रेलियामा रहेको ग्रेट ब्यारियर रीफ, युनेस्कोले अष्ट्रेलियाको विश्व सम्पदा हो, समुद्रको तापक्रम बढेको कारण ब्लीचिंगको समस्या भोगेको छ जसले कोरलहरूको कमजोर जीवनलाई अन्त्य गर्दछ। यहाँ समुद्रमा फेला परेको कोरल चट्टानहरूको कसरी रक्षा गर्ने भनेर फेला पार्नुहोस्।
चश्माको बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्न र उत्तरहरू polarफहराया
बाट The Indian Face® हामी तपाईलाई बुझाउन चाहान्छौं यसको मतलब के हो यसको मतलब हाम्रो सनग्लासहरू हुन् polarफहराया र पनि, हामी वर्णन गर्छौं कि यस प्रकारको सनग्लाससँग के फाइदा हुन्छ polarफहराईयो र किन तपाईं तिनीहरूलाई तिनीहरूको विशेषताहरु अनुसार छान्नु पर्छ। शंकाको साथ नबस्नुहोस्, यहाँ हामी सनग्लासको बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरूको उत्तर दिन्छौं! polarफहराईयो!
ग्रेट ब्यारियर रीफ क्वीन्सल्याण्डको इलाकामा अस्ट्रेलियाको उत्तरपूर्वी भागमा संसारमा कोरल चट्टानहरूको सबैभन्दा ठूलो सेट हो। 340.000०,००० किलोमिटर भन्दा बढीमा कभ्रेट, ग्रेट ब्यारियर रीफ संसारको सबैभन्दा ठूलो जीवित वस्तु मानिन्छ। यहाँ हामी तपाईंलाई प्रकृतिको यो खजाना र यो लुकाउने सबै गोप्य चीजहरूको बारेमा सबै कुरा बताउँदछौं!
क्याप्सहरू संसारभरका लाखौं व्यक्तिहरू द्वारा दैनिक प्रयोगका लागि प्रयोगका लागि वस्त्र र सहायक बनिसकेका छन्: संगीतकारहरू, स्केटबोर्डरहरू, एथलीटहरू ... यी सबै व्यक्तिहरूले क्यापलाई निश्चित संस्कृतिहरू, खेलकुद वा आन्दोलनहरूको लागि आइकनिक कपडा बनाएका छन्। इतिहासमा पहिले र पनी चिह्न लगाइएको व्यक्तिलाई भेट्नुहोस्!
तपाईंको ब्याकप्याक सुसज्जित गर्नुहोस् र तपाईंको अर्को साहसिक कार्य योजना गर्नुहोस्! यद्यपि महामारीले हाम्रो जीवनलाई प्राय: सबै पक्षमा परिवर्तन गरेको छ, तर # भारतीय स्प्रिट्सले हार मानेको छैन र चरमको लागि बाँच्न जारी छ, हो, "नयाँ स्वतन्त्रता" को साथ। तपाइँको मनपर्ने पहाडी खेल अभ्यास गर्न के सिफारिसहरू र सुरक्षा उपायहरू छन् पत्ता लगाउनुहोस्!
सर्फिंगको बारेमा ईतिहास र रोचक तथ्यहरू पत्ता लगाउनुहोस्! १ adventure500 मा अ English्ग्रेजी अन्वेषक जेम्स कुक सफलतापूर्वक हवाई टापु आइपुगेपछि पहिलो साहसिकले पोलिनेशियन टापुहरूमा "त्यस छालमा सवार हुन म शान्त हुन्थें" भन्ने सोचेको since०० बर्ष भन्दा बढी इतिहास हो।
क्यारी स्की चश्माहरू यो आवश्यक हुन्छ जब हामी यसको कुनै पनि ढाँचामा यो खेल अभ्यास गर्छौं। के तपाईंलाई पहिले नै थाहा छ स्की रूपहरू त्यो अवस्थित छ? हामीसँग केही उत्तम मोडलहरू पत्ता लगाउनुहोस् जसमा तपाईं स्की गर्न सक्नुहुन्छ र किन तपाईंलाई सधैं राम्रो व्यक्तिहरू लिनुपर्दछ भनेर जान्नुहोस्! स्की चश्माहरू सुरक्षात्मक!
के तपाईलाई एभिएटर चश्माको इतिहास थाहा छ? अझ राम्रो "भनेर चिनिन्छaviators "सबै भन्दा राम्रो र सबै भन्दा धेरै आइकनको चश्मा हो। पत्ता लगाउनुहोस् कि यो प्रतीकात्मक सहयोगी कसरी पैदा भयो, र जिज्ञासाहरू पत्ता लगाउनुहोस् कि चश्माको जोडीले लुकाउँछ जुन तपाईंको स missing्ग्रहमा हराइरहेको छैन।
के तपाईं प्रकृतिको जोखिमहरू पार गर्न वास्तवमै तयार हुनुहुन्छ जब तपाईं स्की गर्नुहुन्छ? Most सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पलहरू पत्ता लगाउनुहोस् जुन तपाईं उत्तम पहिरनको कदर गर्नुहुन्छ हिउँ चश्मा!